असफलता सम्बन्धि जान्नै पर्ने केहि प्रसिद्द भनाइहरू - ज्ञानविज्ञान
असफल हुनु भनेकाे सबै कुराकाे अन्त्य हुनु हाेइन, याे त एक नयाँ कुरा सिक्न पाउने अवसर हाे । यदि तपाइ असफल हुने डरले अाफ्नाे जीवनमा अाएकाे अवसर बाट भाग्न थाल्नुभयाे भने तपाइ कहिल्यै पनि सफल बन्न सक्नु हुन्न । त्यसैले केहि नयाँ गर्ने प्रयास गर्नुहाेस, त्यहा गल्ति त पक्कै हुन्छ हाेला तर तपाइले त्यहा केहि नयाँ भने अवश्व पनि सिक्न पाउनुहुनेछ ।
अाज हामीले असफलता सम्बन्धि केहि प्रसिद्द भनाइहरू लिएर अाएका छाै ।
1. असफलता भनेकाे अझ बढि सावधानी र विवेककाे प्रयाेग गरेर कामकाे फेरि सुरूवात गर्ने अवसर हाे। 2. कहिले काहि जब तिमीले युद्द हार्छाै, तब तिमीले युद्द जित्ने नयाँ तरिका पत्ता लगाउछाै । 3. असफलता भनेकाे सफलतकाे चाबी हाे, किनकि हरेक गल्तीले हामीलाइ नयाँ कुरा सिकाउछ ।
4. असफलता हुदैन भने नयाँ अाविस्कार र सिर्जनात्मकता पनि हराउछ । 5. राम्राे नतिजा प्राप्त गर्नकाे लागी असफलतालाइ स्विकारेर अगाडी बढ्नु जरूरी हुन्छ । 6. असफलतबाट नअत्तालेउ, त्यसबाट सिक र फेरि सुरू गर । 7. असफलता बिना प्राप्ति असम्भव छ ।
8. सफलताकाे बिउ छर्नकाे लागी असफलाताकाे माैसम सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । 9. लड्नु असफलता हाेइन, हार मान्नु असफलता हाे । 10. अाफ्नाे लक्ष्य प्राप्त गर्ने सपनालाइ असम्भव बनाउने, एक मात्र कारण हाे, असफल हुने डर । 11. सफलताकाे खुसी मनाउनु राम्राे हाे, तर त्याे भन्दा महत्वपुर्ण हाे, असफलताले सिकाएकाे पाठमा ध्यान दिनु ।
12. मैले असफलता स्विकार गर्न सक्छु, कहि न कहि सबैजना असफल भएकै हुन्छन, तर फेरि प्रयास नगर्नुलाइ स्विकार गर्न सक्दिन । 13. सफलता स्थायी हुदैन र असफलता अन्त्य हाेइन ।
Don't Miss it सावधान ! मासु खानु अघि यी कुरामा ध्यान दिनुहाेस्
Up Next आफ्नाे परिवारसँग जतिसक्दाे समय बिताउनुहाेस्ः यस्ता छन् यसका फाइदा